Coverter DVD To MP3 — MYSTERY ZILLION
Coverter DVD To MP3
Full Version DVD To Mp3 ပြောင်းတာလေးကို မရှာတတ်လို့ပါ။
NewLive DVD , All To Real Coverter တို့ကို စမ်းကြည့်တာ Registry မလုပ်ရင်3Mins ပဲ ရပါတယ်.
င်္Free လေးရှိရင် Share ကြပါ။
DVD သီချင်းအခွေကနေ MP3 ပြောင်းချင်လို့ပါ။
တွေ့တဲ့ installer တွေက အချိန် ၃ မိနစ်စာ ပဲ ပြောင်းပေးပါတယ်။
စမ်းဖူးတဲ့ software တွေက All to real Coverter, Newlive DVD To MP3 ပါ။
format factory သုံးကြည့်ပါ့လား။ format တော်တော်များများပြောင်းလို့ရတယ်။dvd ကနေလည်း ပြောင်းလို့ရတယ်။
ပီးတော့ free နော်..။
14 MB ပဲကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်
ကျေးဇူးပါ ကြယ်စင်။ကျနော် ဒေါင်းလိုက်ပါတယ်။ကျနော်တော့ Imtoo ဘဲသုံးဘူးလို့ ImTOO DVD Ripper Platinum ကိုေ၀မျှလိုက်ပါတယ်။
အောက်က link မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
အောက်က link ကတော့ serial no. ပါ။
ကြယ်စင် wrote: »
14 MB ပဲကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်[/quot]
Website ကတော့ ပွင့်ပါတယ်။
Down မယ်လည်းလုပ်ရော The access to requested URL has been denied.
"files.brothersoft.com" Access Denied လို့ပဲ ပေါ်နေပါတယ်။ Error တက်:Oမှ ထပ်မေးမယ်နော်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Serial ကထည့်ဖို့လိုလား။ ထည့်ရမယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်နေရာမှာ ထည့်ရမလဲ။ Install လုပ်တာ အားလုံးပြီးသွားတယ် ။ serial မတောင်ဘူး။ တကယ်တမ်းလုပ်ကြည့်တော့မရလို့ပါ။
Uninstaller လုပ်တာတောင်မရတော့ဘူး။ :O :O :O
CD Audio Track ကို Mail ပို့ချင်ပါတယ်။ ပို့လို့ရ မရသိချင်ပါတယ်။
် ShortCut ပဲပါနေလို့ ပို့လို့ရရင် ဘယ်လိုပို့ရမလဲ သိချင်ပါတယ်ဗျာ။
argyixi ပြောတာ ကျနော်သိပ်နားမလည်ဘူးဗျ။
Audio CD ဒီအတိုင်း သုံးလို့မရပါဘူး။ mp3 (သို့) wma file format အဖြစ်ပြောင်းရပါမယ်၊ Rip လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ Windows Media Player 10 (သို့) 11 နဲ့ပြောင်းရင် ရပါတယ်။
ပြောင်းပြီးသားဖိုင်ကို My Documents\_My Music\_xxxxxxxx\_ မှာရှာကြည့်လိုက်ပါ။
Yaung Sein ကျနော်လည်း ဒီလိုဘဲ နားလည်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ argyixi မေးထားတာက Mail ပို့ချင်ပါတယ်။ShortCut ပဲပါနေလို့ ဆိုတာကို ကျနော်မသိဘူးဗျ။
သူက Audio CD ကို My Computer ကဖွင့်မယ်။ ပြီးရင် CD Drive ထဲက ပေါ်နေတဲ Track ICON ကိုသာမန် MP3, MP4 ကူးသလို Copy & Paste လုပ်နေတာ။ Audio CD က အဲဒီလိုလုပ်ရင် ဘာမှမပါပဲ Shortcut ပဲပါပါနေရောပေါ့။ အဲဒါကြောင့်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ .. Audio CD က Track တွေကို ဒီအတိုင်း ကော်ပီးကူးပြီး ကွန်ပျူတာမှာဖွင့်ရင် တော့ မရပါဘူး ..Short Cut တွေဘဲပေါ်မှာပါ.. cda format ကြောင့်ပါ .. တချို့သော မြန်မာပြည်က CD မျးာကို Audio version အနေနဲ့ထုတ်ကြပါတယ် .. Audio format များဟာ .. ear phone တစ်ဖက်တည်း နားထောင်ရင်တောင် ... ဆိုတဲ့အသံပါ တီးတဲ့အသံပါကြားရပါတယ် .. တစ်ဖက်တည်းလည်း Stero ရတယ်ပေါ့.. နောက်ပြီး အသံ အရည်အသွေးကောင်းပါတယ် ... ဆိုဒ်ကလည်း အရမ်းကြီးပါတယ် .. တစ်ပုဒ်ကို ပျဉ်းမျှ အနည်းဆုံး 30-45 MB လောက်ရှိပါတယ် (quality 256 kbs နဲ့ကူးရင်ပေါ့လေ.. custom လည်းချိန်လို့ရပါတယ်) ဒါပေမဲ့ သူ့ကို လိုချင်ရင် .. Windows Media Player (version 10 ကနေစပြီး) ထဲမှာ Rip ဆိုတာ
ပါပါတယ် .. CD Drive ထဲမှာ ထည့်ပြီး RIP ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင် .. ဘယ်ဟာ တွေကို (ဘယ်နှစ်ပုဒ်လဲပေါ့) .. ပြောင်းမလဲ ဆိုတာကို ရွေးပေးရဦးမှာပါ .. နောက်ပြီး ဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲဆိုတာကိုရော ပေါ့ .. format ကိုတော့ .. mp3 ကိုဘဲထားလိုက်ပါ .. သဘောကတော့ ဒီအတိုင်းတော့ မရဘူး .. Converter တစ်ခုခုနဲ့ ပြောင်းဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာပါ .. ပြောင်းတဲ့ဆော့ဖ်၀ဲများကတော့ အများကြီးပါဘဲ ..
ဗီဒီယို ဖော်မတ်တွေ ပြောင်းဖို့အတွက် ဖရီးရတဲ့ any video converter သုံးကြည့်ပါလား။ မိုက်တယ်။ ကျနော်ကတော့ ဒါဘဲသုံးတယ်။
Internet ကနေ WMP 11 ချတာ wmp11-windowssxp-x86-enu ဆိုတာ တော့ ရသွားတယ်။ Install လုပ်ကြည့်တော့ Validate Your Computer for Window လို့ပေါ်ပါတယ်။ ဆက်လုပ်ကြည့်တော့ repeat ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်လို Download ချရမလဲ ခင်ဗျာ။ ပြီးတော့ အခု စက်မှာ တင်ထားတဲ့ WMP ဆိုတာ ဘာ Version လဲ ဆိုတာလဲ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲမသိဘူး။ Uninstall မလုပ်ပဲ version 11 ကို ထည့်လို့ရလား။ နှစ်ခုကို တစ်ခါတည်းထည့်သုံးလို့ရလား ခင်ဗျာ။
ကူညီပေးကြသော Seniors များ ၊ ၀ိုင်းဆွေးနွေးပေးကြသော Seniors များ အားလုံး ကို လေးစားပြီး
:5: Be Friends လုပ်ချင်လို့ Invite your friends မှာ နှိပ်တော့ E mail တောင်းတာ Seniors တွေရဲ့ E mail ကို ဘယ်မှာ ကြည့်ရမလဲ။
ကို Moe Zatt Ko ပြထားတဲ့ ပုံနဲ့တော့ သိပ်မတူဘူး။ ဒါပေမယ့် Rip ပါတယ်။ Option နှစ်ခုမှာ
Always option ကိုပြောင်းလိုက်ပြီး Only when in the rip tab ကို ရွေးလိုက်တော့ ရသွားတယ်။